Ndị otu Boeing na ndị ụgbọ elu Ethiopia maka ọrụ enyemaka ndị mmadụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ndị otu Boeing na ndị ụgbọ elu Ethiopia maka ọrụ enyemaka ndị mmadụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • News • Ndi akuko • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Boeing jikọrọ aka na ọdụ ụgbọ elu Ethiopian iji nyere ndị nọ na mkpa aka
Boeing na-emekọ ihe Ụgbọ elu Etiopia iji bunye ndị otu gafee Etiopia ngwongwo ndị mmadụ chọrọ.
Linegbọ elu ahụ were 787 Dreamliner ọhụrụ si North Charleston, South Carolina na Disemba wee buo ibu jet 34,000 akwụkwọ akwụkwọ na 5,800 pound nke ụlọ akwụkwọ, uwe na ọgwụ maka ụgbọ elu na-aga Addis Ababa.
“Obi dị anyị ụtọ na anyị na Boeing ga-ebugharị ngwongwo ndị anyị na-ebu na njem anyị na-ebuga na United States,” onye isi ụlọ ọrụ Ethiopian Airlines Group bụ Tewolde GebreMariam kwuru. “Dika nwa amaala ji ọrụ n’aka, anyị ji ọrụ dịịrị ọha na eze akpọrọ ihe ma na-agbasi mbọ ike itinye oke anyị na mmepe mmekọrịta mba na mba.”
Nzukọ otu Ethiopia Reads ga-eziga akwụkwọ na ngwa akwụkwọ na ọba akwụkwọ ya gafee Etiopia nke na-elekọta ụmụaka 100,000 kwa afọ. A ga-enyefe ngwaahịa Mary, Joy Development, nke na-enyere ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa aka inweta ọgwụ ndị dị mkpa iji si na ịda ogbenye pụọ na ọgwụ, uwe na ngwaahịa dị ọcha.
Decembergbọ elu Disemba na-esote ụgbọ elu ọzọ na Nọvemba mgbe ụgbọelu Ethiopian Airlines 787 Dreamliner buuru ihe karịrị 11,000 pound nke uwe, ihe ndị dị ọcha na ọgwụ si South Carolina na-aga Mekedonia Home maka ndị Agadi na Ndị Isi Uche na St Paul Hospital.
Thegbọ elu ndị a so na Boeing's Humanitarian Delivery Flight Program, mmekorita n'etiti Boeing, ndị ahịa ya na ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị, nke na-anapụta enyemaka mmadụ na ụwa niile. Usoro ihe omume a ewepụtala ihe karịrị nde 1.6 nke ihe enyemaka mmadụ na ihe karịrị ụgbọ elu 200 n'ụwa niile kemgbe njem ụgbọ elu ahụ na 1992. Ruo ugbu a, Boeing esorola ndị Etiopia ụgbọ elu soro na 39 ụgbọelu na-eweta nnyefe ọrụ enyemaka, na-enyefe ihe karịrị 266,000 pound nke onunu nye ndị otu Etiopia.
Cheri Carter, osote onye isi oche nke Boeing Global Engagement kwuru, "Site na Boeing's Humanitarian Delivery Flight Program, yana mmekorita ya na ndị ahịa dịka ọdụ ụgbọ elu nke Etiopia na ụlọ ọrụ ebere na gburugburu ụwa, anyị na-enye ndị chọrọ enyemaka ihe dị mkpa na nke na-azọpụta oge." "Anyị nwere ike ime ọtụtụ ihe karịa mgbe anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ, Boeing na-agba mbọ na-aga n'ihu mmekọrịta dị ka nke a."